Dichroic Firimu Vagadziri - China Dichroic Firimu Vatengesi & Fekitori
Holographic Yakagadziriswa Lamination Firimu Yakasiyana Mhando PET & BOPP yePepa Bhodhi uye Kurongedza
Isu tinopa Holographic Yakagadziriswa Lamination Firimu Akasiyana Mhando PET & BOPP yePepa Bhodhi uye Kurongedza. Isu takave nyanzvi mukutakura firimu kweanopfuura makore gumi neshanu, tichifukidza mazhinji emusika weEuropean neAmerica. Isu tiri kutarisira kuzove wako wenguva refu mudiwa muChina. Kana iwe uine chero mibvunzo nezve zvigadzirwa zvedu, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Yega Yekunamatira Iridescent Firimu Pepa Kudzoka kweGirazi Kana Acrylic
Yepamberi Yekunamatira Iridescent Firimu Pepa Kudzoka kweGirazi Kana Acrylic inozadza nzvimbo yako nekungogara ichichinja mavara anodziya uye anowanikwa mune akasiyana mavara uye mazinga ekutakurwa kwechiedza. Iridescent Firimu zvakare inopa yakavanzika kuvanzika nekuvhara yakajeka kuoneka uye kubvumira kwakanakisa mwenje kutapurirana. Isu takave nyanzvi mune yekushongedza firimu kweanopfuura makore gumi neshanu, yedu yega yekunamatira iridescent firimu inozivikanwa mune mazhinji emusika weEuropean neAmerica. Isu tinoshuvira kuzove wako wenguva refu mudiwa muChina. Chero mibvunzo nezve zvigadzirwa zvedu, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu, isu tichaedza nepatinogona napo kusangana nekugutsikana kwako.